Sawiro+Dhageyso Warbixin Ka Hadleysa Filimka Dagaalkii Ceelcadde. – Calamada.com
Sawiro+Dhageyso Warbixin Ka Hadleysa Filimka Dagaalkii Ceelcadde.
calamada April 10, 2016 3 min read
Muuqaalka Filimkan oo la daawan karo muddo 48 daqiiqo ah, kana kooban saddex qeybood oo kala ah English, Carabi iyo Sawaaxili ayaa Alkataa’ib waxay ugu horeyn kaga warameysaa marin-habaabintii iyo isdhexyaacii qabsaday dowladda Kenya iyo warbaahintooda kuwaas oo markii ugu horeysay ee uu dhacay weerarka si rasmi ah u dafiray in weerarka uu ka dhacay xeradooda.
Wuxu si kooban filimku kaga sheekeynayaa Cadaawada iyo dulmiga ciidanka Kenya ay kuÂ hayaan muslimiinta, wuxuuna tilmaamayaa in duulaankii ciidamadii Kenya ay ku soo galeen koonfurta Soomaaliya, uu qeyb ka ahaa xamlooyinka ay ku sii laba jibaarayaan gumaadkooda ka dhan ah muslimiinta bariga Africa balse Mujaahidiinta ku guuleysteen in ay ka hortagaan xamladooda gudaha dalka, sidoo kalena ay u aargudeen walaalahooda lagu dhibaateynayo gobolada la heysto ee muslimiintu leeyihiin.
Intaas ka dib wuxuu filimka Alkataa’ib u sii gudbiyaa soo bandhigda wixii ka dhacay Fagaare dagaalka Ceelcadde iyo xasuuqii aroornimo ee lagala dul dhacay ciidamada Saliibiyiinta Kenya.
Waana dagaalkaas malxamadda ah waxa ugu badan ee lagu soo bandhigayo filimka mudada 48-da daqiiqo ee uu socdo. balse inta aanan loo gudbin Malxamaddaas ayaa waxaa Filimka ka soo muuqanaya geesigii fuliyey Camaliyadii Istish-haadiga ee lagu daahfuray weerarka.
AShahiid Cabdul Qaadir Axmad Cali
Cabdul Qaadir Axmad Cali oo ku magac dheer â€“Farxaan- kana dhashay Beesha Xaaji Saleebaan ee Habargidir, wuxuu ahaa halyeeygii fuliyey camaliyadii istish-haadiga ee lagu daahfuray Weerarkii xerada Ceelcadde.
Wuxuu ahaa halyeey ka tirsanaa Guutada Madaafiicda ee Mujaahidiinta ka hor inta uusan ku soo biirin Katiibada Istish-haadiyiinta. Wuxuu ka soo qeybgalay dagaallo badan oo lagu difaacayey shareecada.
Mid ka mid ah labadiisa lugood ayuu ku waayey dagaal uu la galay cadowga Islaamka.
Dar-daarankiisii ugu dambeeyey wuxuu ahaa in aan la dayicin dhiiga Shuhadada iyo miraha Jihaadka, lana adeeco umarada.
Camaliyadda Farxaan ka dib, waxaa goobta isqabsanaya dhimbilaha rasaasta iyo jabaqda boobayaasha, Iyadoo ay barbar socdaan garneelada garbaha laga tuuro ee lagu bartilmaameedsanayo teendhooyinka iyo gaadiidka gaashaaman ee cadowga. Dagaal malxamad ah oo faraha looga gubtay ayaa ka qarxaya goobta.
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa si isku mid ah ugu daadanaya xeryaha cadowga, islamarkaana jiiraya difaacyada iyo siligga cadowga uu isku wareejiyey.
Muuqaalada ugu muhiimsan ee indhahaagu soo qabanayaana waxaa ka mid ah askar Kenyaati ah oo sii firxanaysa. Gaari gaashaaman oo lagu bursanayo AK47 iyo Cabdi-Bilayaasha Mujaahidiinta oo baacsanaya gawaarida qalifan ee ay gaaladu ku faani jirtay.
Filimka waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay qaar ka mid ah maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalka, kuwaas oo qaarkood fariimo u diray dowladahooda iyo eheladooda, halka sidoo kalena ay Mu’asasadu soo gudbisay qaar kale oo wejiyadooda la qariyey oo ka mid ah maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalka.
Mu’asasada Alkataa’ib waxay sidoo kale filimkan ku soo bandhigtay qeyb ka mid ah warcelinadii ugu muhiimsanaa ee madaxda gaaladu ay ka bixiyeen weerarkii Ceelcadde, iyadoona si gaar ah u soo qaadatay Waziirada Difaaca ee dowladda Kenya, Taliyaha Ciidamada kufaarta Afrikaanta iyo Taliyaha ciidamada Military-ga Kenya ee KDF-ta.
Sidoo kale waxay filimka ku soo bandhigtay baroordiiqii uu Xasan Shaykh uu tagay dalka Kenya iyo sidii uu ugu sujuuday kabihii sanamka ahaa ee lagu xusayey ciidanka la xasuuqay.
Xasan Murtad wuxuu sidoo kale qirayaa in 180 ilaa 200 oo askari ciidamada Kenya looga dilay weerarkaas.
Hoos Ka Daawo Sawirada Filimka Ceelcadde.
Previous: Weerar Qorsheysan Oo Ka Dhacay Deegaanka Diif Kenya.
Next: Bogga Internetka ay Ku Leedahay Idaacadda Andalus oo Dib Shaqadiisa U Bilaabay.
1 thought on “Sawiro+Dhageyso Warbixin Ka Hadleysa Filimka Dagaalkii Ceelcadde.”
Allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walcizatu lil islaam wal muslimiin allaah ayaa mahad usugnaady oo cadawgiisa halaagay kuna halaagy gacmaha mujaahidiinta gaalo wali waxaa udhiman intey dulmiga nagu haayaan saan iyo si kadaran ayeey u le anaayaan marwalba nasriga muslimiinta ayaa u danbeyso waxaaa lajoogaa waqtikii aduunka meel ay ugu baxsadaan ay la ‘yihiin allaah ha u ziyaadiyo halaagood